DHEGEYSO-Madaxweynaha cusub oo sheegay inay kordhinayaan miisaaniyadda dalka. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweynaha cusub oo sheegay inay kordhinayaan miisaaniyadda dalka.
Febraayo 25, 2017 9:52 g 0
Muqdisho, Feb 26 2017-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed( Farmaajo) ayaa sheegay in Sanadkaan la kordhin doono Miisaaniyadda dowladda Marka la eego Balanqaadyada ay haysato dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay haysato Balanqaadyo ka badan kuwii ay heli jireen dowladihii dalka Soo maray , islamarkaana ay sanadkaan ay kordhin doonaan miisaaniyadda dowladda .
DHEGEYSO-Baasaboorka Soomaaliya oo lasheegay inu qiimo yeeshay.